Resaky ny mpitsimpona akotry : ny kibo noana manome sain-dratsy | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : ny kibo noana manome sain-dratsy
Na nisy ihany aza ireo nanome soson-kevitra, tsy mbola niova ny foto-tsakafon’ny Malagasy. Mahavokatra be amin’
ny katsaka sy mangahazo ary ovy isika fa vary ihany ny an’ny Malagasy. Hafa ihany ny mihinam-bary, hoy ny fiteny fandre matetika. Asa na fomba fijery efa tokony hovana izany na tsia fa hatreto aloha, tsy ho anio na rahampitso no ho afaka amin’ny fahazaran’ny Malagasy ny vary. Ny intelo isan’andro aloha dia efa nihena ho indroa fa efa nosoloina zavatra hafa ho an’ny sasany.
Noho izay fahazarana ara-tsakafo izay, maharary ny vahoaka raha misy olana eo amin’ny famatsiana fotsim-bary. Efa mitady hirona any anefa ny fandehan’ny tantara raha ny zava-misy ankehitriny no zohina. Mimenomenona ny maro fa misondro-bidy andro aman’alina ny vary tato ho ato. Saika isan’andro dia misodrotra ny vidin’ny kilao na ny kapoaka. Raha 450 ariary ny kapoaka, ho an’ny karazam-bary sasany, lasa 550 ariary izany ankehitriny. Manodidina ny 100 ariary eo ny fiakarany. Noho izay antony izay indrindra, misy
amin’ny mpivarotra no tsy mametraka intsony ny afisy milaza ny vidim-bary. Antony? Mandreraka fa voatery ovana
isan’andro, hoy ny mpivarotra iray.
Voalaza fa noho ny toetrandro maina ka nahasimba ny voly vary no nahatonga io fiakaram-bidy io. Mahagaga ihany izany. Voalaza ihany koa fa misy mpamongady manafina tahirim-bary. Fika efa taloha sy filma efa nandeha koa raha izany. Toy izany mantsy fomba fanao taloha rehefa te hampiakatra vidin’entana. Alentika mandritra ny fotoana vitsy, rehefa tena mila sy mitady ny olona vao avoaka fa atao
amin’ny vidiny ambony dia ambony.
Fa amin’izao raharaham-pirenena mafampana izao, matahotra ihany koa na ireo mpivarotra aza noho ity fiakaram-bidin’ny vary avy any amin’ny mpamongady izao. Ambaran’izy ireo fa mety hitroatra ny olona ka izy ireo indray no hifoterany na dia tsy avy aminy aza no fototry ny fampiaram-bidy ny voa madinika. Tsy ferana ihany koa fa rehefa noana ny kibo dia miitatra ho azy ny saina.
Volamena fotsy amin’ny Malagasy ny vary ka tokony hojeren’izay tomponandraikitra tandrify izany. Voalaza fa tsy misy ahiana ny famatsiam-bary eo amin’ny tsena anatiny fa na tiana na tsy tiana dia tsy handeha amin’ny tokony ho izy ny zava-drehetra rehefa voakitikitika ny ain-dehibe.